Secretary General UNWTO: Ebube na nke fechaa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Secretary General UNWTO: Ebube na nke fechaa
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Georgia • Mgbasa Ozi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọpụpụ UNWTO Secretary General Na Ndị a chọrọ Secretary General Họrọ:
Heavyweights vs lightweights ruru eru vs erughị eru, ọ bụ mgbe kwa ike ịhụ. Anyị niile nwere ike ịghọta na onye ọ bụla na-erute ọkwá mmadụ erughị eru ịrụ. Mana ọ bụghị ma ọ bụrụ na etinyere ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa.
Ikekwe, ọ bụrụ na mmadụ nwere ụlọ ịgba bọl, mmadụ nwere ike wepụta ohere were otu onye na-elekọta ụlọ ịgba bọọlụ ọkachamara ọkachamara. Dị ka ọ dị na Zurab Pololikashvili, onye nwere obere oge na klọb ịgba bọọlụ, dịka akụkụ nke oge gara aga. Ọ dịghị nke na-eme ka o ruo eru n'ụzọ doro anya iru, na ọ bụ iru n'ezie, iduru Organizationtù Mba Ndị Na-ahụ Maka Njem Ọchịchị nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNWTO).
Okwesiri ka Nzukọ Ezumezu na Chengdu, China ịtụ vootu n'ike nye ọkwa kachasị nke njem njem mba ụwa, neophyte nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ahụmịhe njem nlegharị anya?
Nke a bụ UNWTO anyị, nzukọ a na-akwanyere ùgwù ma na-asọpụrụ nke na-anọchite anya ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa. Ka anyị pịa bọtịnụ nkwụsịtụ ma tụlee iru eru nke onye ọ bụla a ga-akwado ma ọ bụ jụ na UNNTO General Assembly nke 22 na-abịanụ dị ka odeakwụkwọ ukwu ọhụrụ.
Ka anyị nyochaa abụọ malitegharịa. Nke mbụ ndị mmadụ masịrị, ndị a na-akwanyere ùgwù, Taleb Rifai.
Dị ka UNWTO na-apụ na Secretary General na-enwe ọmarịcha ndekọ egwu yana ezigbo onye ndu pụtara ìhè na aka dị ike. Nke a bụ Dr.Rifai's CV mgbe ọ na-akwado maka ọnọdụ nke UNWTO Secretary General.
Maazị Taleb Rifai weere ọrụ nke Secretary General ad obere oge nke World Tourism Organisation (UNWTO) kemgbe 1st. Machị. Ọ rụrụ ọrụ dị ka osote onye isi ode akwụkwọ site na February 2006 ruo February 2009
Tupu ọ were ọkwa ya ugbu a, ọ bụ onye nchịkwa Director nke International Labour Organisation (ILO) ruo afọ atọ. Ọrụ ya gụnyere nlekọta na mmejuputa iwu nke International Labour Standards, yana ịdụ ọdụ n'ahịa ọrụ na amụma ndị ọrụ, ọkachasị na mpaghara Middle East.
Site na 1999 rue 2003, Maazị Rifai rụrụ ọrụ n'ọtụtụ ọkwa mịnịsta na gọọmentị nke Jọdan, nke mbụ dị ka Mịnịsta nke Atụmatụ na Mmekọrịta Mba Nile na-ahụ maka Development Development Agenda na mmekọrịta mba na mba na mba ndị nyere onyinye na ụlọ ọrụ. Emechiri ya dika Mịnịsta nke Ozi, nke ikike ya na-ahụ maka nkwukọrịta na mgbasa ozi ọha na eze ma hazigharị Jordan Television Network. N’afọ 2001, pọtụfoliyo ya gbasapụrụ wee banye na Mịnịstrị nke njem na oge ochie.
N’oge ọ bụ Mịnịsta njem na njem ochie, Maazị Rifai guzobere Ogige Archaeological Jọdan nke mbụ na obodo ochie nke Petra na mmekorita ya na UNESCO na World Bank. Ọ chọpụtakwara ọtụtụ nnukwu ọrụ na Jerash, Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ na Wadi Rum. Dika onye njem nleta, o burukwa onye isi oche nke ndi njem nleta nke Jordan, Onye isi ulo akwukwo nke umu akwukwo ndi Amon maka ndi njem nlere anya ma hoputara ya onye isi oche nke ndi isi ochichi nke UNWTO na 2001
N’afọ atọ bu ụzọ tupu ọrụ ya na Cabinet Cabinet, Maazị Rifai bụ onye isi nke ụlọ ọrụ Cement Jordan, otu n’ime ụlọ ọrụ ndị na-eketa oke ọha na mba nwere ihe karịrị ndị ọrụ 4000. N'oge nke ya, ọ gara nke ọma na-eduzi ma na-eduzi atụmatụ izizi nke nnukwu nrụzigharị na nwughari na Jọdan site na iweta ụlọ ọrụ simenti French Lafarge na 1998 wee gaa n'ihu na-eje ozi dị ka onye isi ala n'okpuru njikwa Lararge ọhụrụ.
Site na 1993 ruo 1997, Maazị Rifai tinyere aka na itinye aka na amụmapụta na ịzụlite azụmaahịa na atụmatụ itinye ego, na mbido ya dị ka Director nke Jordan's Economic Mission to Washington DC na-akwalite azụmahịa, itinye ego na mmekọrịta akụ na ụba n'etiti Jọdan na USA. Na 1995 ọ ghọrọ Director General nke ụlọ ọrụ Investment Promotion ọhụrụ guzobere, na-ahụ maka ịmepụta na mmejuputa atumatu na-achọ ịdọrọ ntinye ego nke ndị ọzọ na Jordan.
Site na 1973 rue 1993 Maazị Rifai tinyere aka na nyocha, nkuzi na ịrụ ọrụ ihe owuwu na Urban Design na Jordan na United States. Ọ bụ prọfesọ nke Nhazi ụlọ na Mahadum Jọdan wee kuzie ọtụtụ nkuzi na Philadelphia, Chicago na Cambridge. Dị ka onye na-ese ụkpụrụ ụlọ, ọ meriri n'ọtụtụ asọmpi mba ụwa ma lekọta ọtụtụ ọrụ, ọkachasị na nhazigharị obodo ochie.
Maazị Rifai natara nzere PhD na Urban Design and Regional Planning na Mahadum Pennsylvania na Philadelphia na 1983, nzere Master's in Engineering and Architecture na Illinois Institute of Technology (IIT) na Chicago na 1979, yana BSc na Architectural Engineering si. Mahadum Cairo dị na Egypt na 1983
Maazị Rifai, onye mba Jordan nke amụrụ na 1949, agagharịwo ma kwue okwu nke ọma, wee nata ọtụtụ ihe ịchọ mma dị iche iche gụnyere otu n'ime ọla nrịgo kachasị elu nke Jordan maka ọrụ ọha na eze, Al Kawkab, yana ọtụtụ ihe ịchọ mma dị elu site na France, andtali na mba ndị ọzọ. .
Nzụlite Maazị Rifai na-agwakọta ahụmịhe siri ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ihe ọmụma teknụzụ na mpaghara nke njem, yana ahụmịhe na ọrụ na ịrụ ọrụ nke nzukọ mba dị iche iche. Nzụlite ya na-enyekwa ya nnukwu akụ na ụba, azụmaahịa na agụmakwụkwọ.
N'oge ọrụ ya niile, Maazị Rifai abụwo onye na-eme mgbanwe na onye na-ewu nkwenye: importantkpụrụ abụọ dị mkpa n'ịgbanwe mgbanwe na-adịgide adịgide. Ikike ya iwebata echiche ọhụrụ yana iso ndị mmadụ na-arụkọ ọrụ iji hụ na ịzụta na iji nweta mgbanwe na-adịgide adịgide pụtara ìhè na mbọ ya niile, ọkachasị, ịhazigharị Jordan Television Network, na-ahụ maka ụlọ ọrụ Cement Jordan ma na-ewebata echiche ọhụrụ na UNWTO
N'ịbụ onye jere ozi dị ka osote Secretary General nke UNWTO n'ime afọ atọ gara aga, Maazị Rifai enwetawo ahụmịhe bara uru na nghọta banyere mkpa na atụmanya nke UNWTO. Ọ na-atụle onye siri ike nwere ikike niile, ahụmịhe na ihe ọmụma yana ikike iwebata mgbanwe na mgbanwe dị mkpa na UNWTO
Ugbu a, ka anyị nyochaa Secretary General General, Zurab Pololikashvili ugbua, nke na-anaghị egosipụta ọtụtụ ahụmịhe n'ime njem ma ọ bụ njem.
A na-atụ agwa agwa, onye ego, na onye bụbu onye isi egwuregwu bọọlụ, Pololikashvili anọghị n'otu otu Rifai, n'ụkpụrụ ọ bụla. Eze ukwu ahụ enweghị uwe ọ na-apụta.
Onye nnochite anya Extraordinary na Plenipotentiary nke Georgia na Alaeze nke Spain, Onye isi nke Andorra, ndị Democratic Democratic Republic of Algeria na Alaeze Morocco na-anọchi anya Georgia na World Tourism Organisation (UNWTO)
Onye nnochite anya POLOLIKASHVILI nwere ahụmihe sara mbara nke ịrụ ọrụ na ngalaba nzuzo na nke ọha na ọkwa dị elu.
Ọ nwere ọtụtụ ahụmịhe nke nnọchi anya gọọmentị, ebe ọ nọchitere anya Georgia na World Tourism Organisation (UNWTO), yana ije ozi dị ka onye nnọchi anya Extraordinary na Plenipotentiary na Alaeze nke Spain.
Ọ nọkwa n'ọkwa onye osote Mịnịsta Ofesi na 2005 ruo 2006.
2009-2010, Mịnịsta nke Economic Development nke Georgia. Dika onye Minista nke Economic Development of Georgia, onye nnochite anya Pololikashvili bu onye lebara anya na atumatu ego gbasara ego nke mba a ogologo oge, maka ikwalite atumatu ahia mba ofesi na itinye ego na itinye ego, yana ikwalite mmepe nke njem, ihe ndi ozo na ndi njem.
O nyeere aka n'iwepụta atumatu ohuru maka mmepe nke njem nleta na Georgia, na-ebute ụzọ nke gọọmentị na nke ụlọ ọrụ nzuzo.
N'oge onye nnochite anya Pololikashvili dị ka Mịnịsta nke Economic Development, site na mgbanwe mgbanwe amụma, ọrụ azụmaahịa, mmelite nke akụrụngwa na nnwere onwe nnwere onwe nke visa, Georgia jisiri ike belata ọnụọgụ kwa afọ nke ndị mbata mba ụwa, site na 1.5 nde (na 2009) gafee 2.8 nde nde site na 2011
Mgbanwe ndị ahụ meghere ụzọ maka omume njegharị na-aga n'ihu na Georgia na mmemme mbelata ịda ogbenye, na-etinye Georgia n'etiti ndị njem kachasị njem na mpaghara ahụ. Minista Pololikashvili nwere ihe ịga nke ọma duru usoro nnwere onwe akụ na ụba, na-ewebata atumatu nkwado ndị ọzọ maka SMEs, yana mmemme agbamume iji dọta ego ndị mba ọzọ maka mmepe nke akụrụngwa siri ike ma dịkwa nro.
2006 - 2009 Onye nnọchiteanya pụrụ iche na Onye Pụrụ Iche nke Georgia na Alaeze Spain.
2005 - 2006 Deputy Minister of Foreign Affairs nke Georgia. N’ikike nke a dị ka onye osote Mịnịsta nke okwu Ofesi nke Georgia, ọ lekọtara ngalaba maka nhazi, mmefu ego, ego na nke ndị na-ekwuchitere ya, yana Ngalaba Maka Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ.
Pololikashvili bụ ọrụ maka iwebata usoro ọhụụ nke usoro nnabata na -ekwupụta ntụkwasị obi karị, mmezi nke usoro iji belata usoro ịgafe ókèala, yana mmekọrịta miri emi n'etiti ndị otu mba dị iche iche, gụnyere UNWTO.
Ahụmahụ nkeonwe oru. Ahụmịhe nke ndị nnọchi anya onye nnọchi anya gọọmentị Pololikashvili gụnyere ọtụtụ afọ na ngalaba ego na akụ, na-eje ozi dị ka onye njikwa nke International Operations maka TBC Bank (otu n'ime ụlọ akụ kacha nwee ihe ịga nke ọma na Georgia), Director nke TBC Bank's Central Branch Office (2001-2005) na Onye isi oche nke TBC Group (2010 - 2011) Na 2001 - 2011
Onye nnochite anya Pololikashvili bụ onye isi nke FC Dinamo Tbilisi, onye otu ndị otu egwuregwu bọọlụ na Georgia. Asambodo Mmụta.
2008 - 2009 Global Senior Management Program (GSMP), IE Business School, Instituto de Empresa, Madrid, Spain 1994 - 1998
Nzere bachelọ na akụ, Georgian nka na ụzụ University, Tbilisi, Georgia.
Data nkeonwe ụbọchị ọmụmụ: 12 Jenụwarị 1977, Tbilisi, Georgia Ọnọdụ alụm di na nwunye: Di na nwunye nwere ụmụ atọ
Asụsụ: Georgian (nwa afọ) Bekee, Spanish, na Russian (nke na-aga were were n'ọnụ) French, Japanese na Polish (asụ)
Anyị kwenyere na UNWTO anyị kwesịrị ijikwa, duzie ma na-eduzi anyị site n'aka ndị njem nlegharị anya oge niile, ma ọ bụrụ na ọbụghị kpakpando. Otu onye ụlọ ọrụ anyị matara dị ka onye nwere nnukwu ikike ịchị ọchịchị nke UNWTO anyị.
Dị ka ụlọ ọrụ, nwere mmiri na-adịghị mma na ọgba aghara zuru ụwa ọnụ zuru oke, anyị dabere na Nzukọ Ezumezu na-abịanụ ka ọ bụghị naanị ịkwado onye isi ọdee akwụkwọ a họpụtara. Otu enweghị ike ịgha ụgha ma ọ bụ fudge ihe ọmụma, talent ma ọ bụ ezigbo ndu.
Mmiri ugbu a kariri cha cha maka General Assembly na Chengdu, China n'ọnwa na-abịa.
Ngosipụta nke Pololikashvili dị ka Secretary General a họpụtara ezughi naanị iji kwado mba ndị tozuru oke. Anyị na-agba ndị isi ọgbakọ omebe iwu ịtụ vootu ume ka ha leruo ogologo oge anya nke ọma na ọrụ nke Secretary General nke UNWTO. Ọ dị mkpa, ọ dị oke egwu. Anyị chọrọ ma chọọ onye ndu nke UNWTO anyị ga-enwe ọhụụ, ọgụgụ isi, ikike, ihe ọmụma, ahụmịhe, ike, na obi ike iji duru ma duzie anyị n'otu dịka ụlọ ọrụ.
Anyị dabere na ya.